Accueil > Gazetin'ny nosy > Covid-19 : Ahiana mafy ny 3ème vague
Covid-19 : Ahiana mafy ny 3ème vague
Andro vitsy lasa izay no nanao fanambarana ny talem-paritry ny OMS aty Afrika, ny Dr Matshidiso Moeti, fa ahiana mafy ny mety hisian’ny 3ème vague aty amin’ny kaontinanta afrikanina, indrindra fa ny amin’ny tapany atsimo na ny Afrique subsaharienne rehefa mandinika ny zava-misy sy ny fivoaran’ny Coronavirus amin’ny firenena tsirairay avy. Raha efa voafehy ny fihanaky ny valan’aretina eto Madagasikara, nanomboka ny volana mey lasa teo, dia mifanohitra tanteraka amin’izany ny zava-miseho any amin’ireo firenena afrikanina maro satria mitombo isan’andro ny tranga vaovao raha ny tarehimarika ofisialy voarain’ny OMS.
Rehefa mijery ny toe-draharaha misy eto amintsika anefa, indrindra fa ao anatin’izao vanim-potoana hankalazana ny fetim-pirenena izao, dia ahiana mafy ihany koa ny mety hisian’ny andiany fahatelo (3ème vague) amin’ny Coronavirus, afaka fotoana fohy. Lasa goragora tanteraka ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana, ankehitriny, kanefa tsy mbola resy tanteraka ny valan’aretina fa mbola misy foana ny tranga vaovao sy ny lavon’ny aretina, isan’andro. Tsy mahagaga izany satria ny fitondram-panjakana mihintsy no manalefaka ny fepetra, ny vahoaka koa anefa etsy ankilany dia tsy mivaky loha firy intsony fa efa samy manao izay saim-pantany avokoa.
Ho avy moa ity ny datin’ny 26 jona, hifampitakisina sy hitangorona ny vahoaka manomboka rahampitso hariva, ary mbola hitohy izany amin’ny sabotsy. Ny fitondram-panjakana koa efa nampahafantatra fa azon’ny be sy ny maro hatao ny manatrika ny matso eny amin’ny kianja Barea Mahamasina. Voalaza moa fa anisan’ireo fepetra hapetraka, amin’io fotoana io, ny fametrahana elanelana eo amin’ireo vahoaka hijery matso eny an-kianja, saingy raha ny fahafantarana antsika Malagasy dia mety tsy hahasakana ny fifindran’ny tsimonkaretina izany. Mirazotra amin’izany rehetra izany, efa tafiditra tanteraka ao anatin’ny ririna izao isika eto Madagasikara, vanim-potoana izay tena mampirongatra ny aretina, ao anatin’izany ny Coronavirus.